धाँधलीमा सेनाको संलग्नता भए प्रमाणित गर: आयोग - BBC News नेपाली
धाँधलीमा सेनाको संलग्नता भए प्रमाणित गर: आयोग
7 डिसेम्बर 2013
Image caption नेपाली सेनाले धाँधलीमा आफुलाई संलग्न रहेको आरोप लगाएर विवादमा नतान्न आग्रह गरेको छ।
नेपाली सेनाले मतपेटिका ओसारेको र कतिपय ठाउँमा ब्यारेकमा समेत राखेको कुरा प्रमाणीत गर्न निर्वाचन आयोगले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई चुनौति दिएको छ।
एकजना आयुक्तले बीबीसीसँग कुरा गर्दै मतपेटिका ओसार्ने काममा सेना प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको र ब्यारेकमा समेत नराखिएको बताए।
आफुलाई पराजित गर्न सेना समेत धाँधलीमा संलग्न रहेको एकीकृत माओवादीको आरोपका सन्दर्भमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपाली सेनाले चुनाव सकिएको दुईसातापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि लागाइएको आरोप अस्वीकार गरिसकेको छ।
तर पनि एकीकृत माओवादीका कतिपय शीर्ष नेताहरुले धाँधलीमा सेना संलग्न भएको आरोप लगाउन छाडेका छैनन्।
चुनावमा मतपेटिका ओसार्ने र कतिपय सैनिक व्यारेकमा मतपेटिका राखिएको भन्ने आरोप सरासर गलत भएको निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताएका छन्।
कहाँ मतपेटिका सेनाले बोकेर हिंडेको छ? कहिले पनि सेनाको ब्यारेकमा मतपेटिका जाँदै जाँदैन। तपाईं एकजना मात्रै मतदान अधिकृत निकाल्नुस जसले मतपेटिका सेनाकोमा राखेको हो भन्न सकोस्। तथ्यहिन कुरा गरेर त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोज्नु राम्रो हुँदैन
उनले भने, “कहाँ मतपेटिका सेनाले बोकेर हिंडेको छ? कहिले पनि सेनाको ब्यारेकमा मतपेटिका जाँदै जाँदैन। तपाई एकजना मात्रै मतदान अधिकृत निकाल्नुस जसले मतपेटिका सेनाकोमा राखेको हो भन्न सकोस्। तथ्यहिन कुरा गरेर त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोज्नु राम्रो हुँदैन।”
सरकारले चुनावका निम्ति तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रोमा नेपाली सेनालाई सुरक्षाको जिम्मा दिएको थियो।
तर एकीकृत माओवादीले सेनाले मतदान प्रक्रिया र मतपेटिका ओसार पसारमा प्रत्यक्ष संलग्न रही आफुलाई हराउन धाँधलीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउने गरेको छ।
जंगी अड्डाले विहिबार विज्ञप्ति निकालेर त्यस्तो आरोप प्रति आपत्ति जनाउदै राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा नतान्न आग्रह गरेको थियो।
मतदानपछि मतपेटिकाहरु मतदान अधिकृतले निर्वाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्न सदरमुकाम ल्याउने क्रममा सेनाले मतपेटिका अदलीबदली गरेको एकीकृत माओवादीको भनाई रहँदै आएको छ।
तर उक्त आरोप आधारहिन भएको भन्दै सेनाले आफ्नो बचाउ गरेपछि निर्वाचन आयोगले समेत धाँधलीमा सेना संलग्न भएको भए प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौति दिएको हो।